Frida Kahlo and Diego Rivera (1932)
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (6 Adoolessa 1907 - 13 Adoolessa 1954) halluu dibduu Meeksikoo tan Frida Kahlo jedhamuun beekamtuudha. Kan isheen beekamtu surreal fi hojii dhuunfaa isheetiini. Isheen hallu dibaa beekkama akka ishee Diego Rivera waliin kan gaa'ela uummate.
Isheen kan dhalatte Coyoacán, Meeksikoo keessatti. Pooliyoon ishee umurii waggaa 6 qaama midhamtuu kan godheen yoo ta'u namoonni tokko tokko waan spina bifida (dhukkuba dhalootaan guddina qaama spine dhoorku) dabalataan akka qabduu yaadu. Isheen Medicine barattee doktora ta'uuf turte. Sababa balaa tiraafikaatiin ishee umurii 18 kan miidhamte, laalaa dhukkubaa cimaa waliin jireenya ishee hafee kan dabarsite. Balaa kana booda, Kahlon barnoota fayyaa ishee itti hin fufne garuu halluu dibuu jalqabde. Isheen yaada waa'ee ishee mudatee kan fayyadamtu yoo ta'u karaa fakkiin ishee dhukkubbiii fi jireenya dubartoota, keessumaayyuu miirri daa'ima horuu dadhabuu ishee agarsiisu baay 'ee nama rifachiisa. Fakkiin ishee 143 keessa afurtami-shan kan waa'ee ofii isheeti. Isheen aadaa Meeksikoo bifa ifaa dhugaa fi mallattoon walmakaas ni fayyadamti. Fakkiin ishee aartistii Diego Rivera ofi harkisee boodarra gaa'ela uummatan. Ishen otoo ofi hin dhoksine bisexual fi communist turte. Dhukkuba bronchopneumonia sababa pulmonary embolism dhufuun Coyoacán kessatti kan isheen boqotte.
Hojii ishee yeroo tokko tokko ′′surrealist′′ jedhamu agarsiisa aartiiwwanii yeroo baayyee surrealist Yuuroppi waliin qopheesituus, isheen ofiishee akka sana waamamuu hin jaallanne. xiyyeeffannaan ishee dubartoota, fi amanamummaan ishee halluu dibuu keessa jiru, akka waan hoggantuu feminist cult dhuma jaarraa 20 ffa ilaalamtu ishee taasise. Hojiin ishee muraasni muuziyeemii Frida Kahlo kan iddoo dhaloota ishee fi magaalaa xiqqoo itti guddatte Mexico city argamu keessatti agarsiifama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Frida_Kahlo&oldid=37213" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 24 Fulbaana 2021, sa'aa 01:38 irratti.